"ဘုရား မစင် ရှာပုံတော်ဖွင့် ဥပဒေကြီး ပြင်လိုက်စမ်းပါ ကိုခင်ရီ" - News @ M-Media
in ဆောင်းပါး — October 2, 2012
အောက်တိုဘာ၊ ၂ ၊ ၂၀၁၂
ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ နှင့် စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂ ည ၇ နာရီ RFA မေးမြန်းခန်းသို့ ရည်ညွှန်း
၁။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေအား ပြုပြင်ရန်မလိုဟု မိမိကိုယ်ပိုင်အမြင်အရ ထင်မြင်ပါသည်ဆိုသော ဝန်ကြီးမင်းက အောက်ပါ အချက်များကြောင့်ဟု ပြောပါသည်။
(က) ယင်းဥပဒေသည် (၆) နှစ်ကြာ ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းကြောင့်
ဒါဆို ထပ်ဖြေပေးပါ။ ဥပဒေတစ်ရပ်၏ ပြည့်စုံကောင်းမွန်မှုသည် ရေးဆွဲချိန်ကြာမြင့်မှု့ နှင့် သက်ဆိုင်ပါသလား?
(ခ) ပညာရှင်များစွာဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း
ဒါဆို ထပ်ဖြေပေးပါ။ မည်သူတွေ ပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့ပါနည်း။ ထိုစဉ်က ယင်းဥပဒေပြုစုသော အဖွဲ့ကို တိုင်းသိပြည်သိမကြေငြာခဲ့ပါ။
(ဂ) တိုင်းပြည်ဒေသအနှံ့အပြားသို့ ချပြဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း၊
ဒါဆို ထပ်ဖြေပါ။ အားလုံးကောင်းပါသည်ဆိုသော မဆလ ပါတီတွင်း၌သာ ချပြဖြစ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ဘူးလား?
(ဃ) ယနေ့ ခေတ်စားလာသော လူ့အခွင့်အရေး၊ ကလေးအခွင့်ရေးများနှင့် ကိုက်ညီမှု့ ရှိနေပါသည်။
ဒါဆို ထပ်ဖြေပါ။ သေချာပါရဲ့လား? ဒီဥပဒေကို UN တွင် ဝေဖန်ထားသည်ကို မသိသည်လား၊ မသိဟန်ဆောင်တာပါလား။
(င) ဥပဒေပါ (၁၈၂၃) ခုနှစ် မတိုင်ခင် အခြေချ နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားဟု ဆိုသူများသည် ကရင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင် ၊ ရှမ်း တို့ နှင့် ယင်းတို့ အနွယ်များဟု ဘူးလုံးနားမထွေး ရောနှော ၍ ရောမချမချစေချပါ။ လူမျိုးစု ၁၄၄ မျိုးမှ ၁၃၅ မျိုး၊ မနေ့တစ်နေ့က မှ ၁၀၁ မျိုး ထိုအတိုးအလျော့များကို မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သော လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် သတ်မှတ်ပြောင်းလဲနေပါသနည်း ။ အချို့သော လူမျိုးစုများ ဥပမာ ဒိုင်းနက်၊ မာရမာကြီး၊ ကိုးကန့် တို့ကို တိုင်းသားဖြစ်လိုက် မဖ်ြစလိုက် မည်သူတွေ သတ်မှတ်နေပါသလဲ။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူစဉ်က တိုင်းရင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော လူမျိုးစုများကို ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ အမိန့်ဖြင့် ဖြုတ်ချခဲ့ပါသလဲ? ၁၉၄၈ ခုနှစ် မတိုင်ခင် မျိုးဆက် ၂ ဆက် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ခိုင်လုံသည့် သက်သေပြနိုင်လျှင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသည် ဟု ဇွတ်ပြောဆိုနေမှု့နှင်ပတ်သက်၍
(စ) ဗျတ်ဝိ ဗျတ္တမှ အစပြုကာ ပဋိတ်ခရား အစရှိသော နိုင်ငံခြားသားတို့ ပုဂံခေတ်မှာပင် ပြည်တွင်းနေများဖြစ်ကြသည်။ ဦးကုလားရာဇဝင် တစ်ခုတည်းနှင့် ပင် ၁၈၂၃ မတိုင်ခင်ကတည်းက ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံခြားသား (ခင်ဗျားတို့ အခေါ် ကုလားများ ရှိနေခဲ့ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။ ) အနီးဆုံးဖြစ်သော မင်းတုန်းမင်း၊ သီပေါမင်းတို့ လက်ထက် ဘုရင့် စစ်တပ်မှ မင်းမှု့ထမ်းများ၏ အဆက်အနွယ်၊ အမရပူရ တောင်မြို့ ဗုံအိုးရွာသူ ရွာသားများကို ဘာကြောင့် နိုင်ငံသားကဒ် အတွက် သွေးနှော သံသယဟု စွပ်စွဲနေပါလဲ? မည်ကဲ့သို့ ခိုင်လုံ သက်သေပြရပါမည်လဲ? မြန်မာပြည်တွင် မည့်သည့် အချိန်ကာလတွင်မှ ယင်းကိစ္စအလို့ဌာ စာရွက်စာတမ်းများ စတင်ခဲ့ပါသလဲ။
ကိုခင်ရီ နဲ့ ကျူပ်တို့က ၆၀ တန်းတွေပါ။ ခင်ဗျား အဖိုးအဖွားတွေ (၄) ဦးစလုံး မှတ်ပုံတင်ပြနိုင်ပါသလား ။ သူတို့မှာ မွေးစာရင်းရှိပါသလား။ ကုန်ကုန်ပြောမယ် ကိုခင်ရီ ခင်ဗျားမှာ မွေးစာရင်းမရှိပါ။ မရှိနိုင်ပါ။
ခင်ဗျား ဌာန လုပ်ပုံက မနေ့တနေ့က နိုင်ငံခြားက လာတဲ့ ဗမာစကားသိပ်မတတ်တဲ့ အဖိုးအဖွာား ၂ ဦး ( ၄ ဦးထဲက ၂ ယောက်ပေါ့ဗျာ) UCC ခေါ်နိုင်ငံသားပြုခွင့် (၁၉၄၈. . ၄၉.. ၅၀.. ၆၂.. ၆၄) လျောက်ထားတဲ့ စာပြနိုင်တဲ့ သူတွေကို ၁၉၈၂ ခု ဥပဒေနဲ့ ညီတယ်ဆိုပြီး ( ဘောင်ဝင်တယ်ပေါ့ဗျာ) နိုင်ကဒ် သိပ်မခက်ဘဲ ရနိုင်တယ်။ ထုတ်ပေးတယ်။
အဲ့ အဖိုးရဲ့ အဘိုး ၊ အဖွားရဲ့ အဘွား လက်ထက်ကတည်းက ဒီမှာမွေး ဒီကလူမျိုး (ဆွေမျိုးတွေမှာလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ရှိနေကြတဲ့) လို့ ကိုယ်ကို ကိုယ် သတ်မှတ်တယ်။ ဘာ UCC မှ လျောက်မထားဘူး ၊ လျှောက်ဖို့လဲ လဲ မလိုဘူးလေ၊
အဲ့ သူတို့သားသမီးတွေ့ (ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ မိဘအရွယ် အသက် ၈၀ ကျော်တန်းတွေပေါ့) ရိုးရိုး ၂ ခေါက်ချိုး၊ ၃ ခေါက်ချိုး မှတ်ပုံတင်ဘဲ ၇ှိတယ်ကြတယ်။ တချို့လဲ စောစော (၁၉၅၃ – ၅၉ စသည်ဖြင့် သေသွားကြတယ်။ )
သေလို့ ၂ခေါက်၊ ၃ ခေါက်ချိုး မှတ်ပုံတင်တောင် မ၇ှိဘူး
ဒါဆို သွေးနှော သံယယ သွားတော့ တိုင်းရုံး၊ နေပြည်တော ဘုတ်အဖွဲ့ ဟိုစာရွက် ဒီအထောက်အထား အင်း ဘုရားချီး ရှာခိုင်းနေတယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပြည်စုံလိုက်တဲ့ ..၁၉၈၂ ခု ဥပဒေကြီးဗျာ.
တပ်ထဲမှာ ခင်ဗျား အောက်မှာ လုပ်သွားတဲ့ အရာရှိရဲ့ ဇနီးက ကျူပ်ညီမအရင်းခေါက်ခေါက်ပါ။ သူ နိုင်ကဒ် ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ပါ။
ကျူပ်တို့ တစ်တွေ မောင်နှမ အရင်းတွေဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ/ဗမာ ၊ ပသီ/ဗမာ … စုံနေတာပါဘဲ။
၁၉၄၈ ခု မတိုင်ခင်က မျိုးဆက် ၂ ဆက် ဒီတိုင်းပြည်မှာ နေထိုင်ကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထား?
ခင်ဗျားတို့ မွေးရာပါ တိုင်းရင်းသားတွေကော အဲဒီအတွက် အထောက်အထား ဘာနဲ့ သက်သေပြမလဲ ။ မွေးရာပါ တိုင်းရင်းသားဆိုတာနဲ့ ပြီးရောလား တိုင်းသိပြည်သိ ကုလားမျိုး တရုတ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ နာမည်တွေပြောမယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းပါမယ်။ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေလဲပါမယ်။ ဒီနေ့ သူတို့ မျိုးဆက်တွေ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမို့လို့ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ နိုင်ကဒ်လွယ်ကူနေတာလား?
အမေဘက်ရော၊ အဖေဘက်မှာပါ ဒီနေ့ ခေတ်စားနေတဲ့ ကိုးရီးယား ရုပ်လေးတွေနဲ့ ဝမ်းကွဲတွေ၊ တူ/တူမတွေ ရှိတယ်။ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ တွေပေါ့ဗျာ။
ဘာသံသယမှ မရှိ၊ နိုင်ကဒ် ရဖို့ လျောလျောလျူလျူပါဘဲ။
ကျူပ်က အစ္စလာမ်ဆိုတော့ အောက်သက်ဖွားလာသမျှ သံသယ၊..
ဒီသံသယ ဘယ်တော့မှ ပျောက်သွားမှာလဲ? ‘
ဒီနေ့ ခင်ဗျားတို့ ဘော်ဒါကြီး ဝန်ကြီးမင်း ဦးသောင်းလွင် (ကျူပ်ထပ်တောင် ကုလားရုပ်ပေါက်တယ်နော်) နိုင်ကဒ်မှာ ဘာရေးထားလဲ သိချင်ပါတယ်။ သူ့ သားသမီးတွေကော?
ခင်ဗျားတို့ ဌာနကြီး လူလေးစားသွားအောင် နမူနာအနနဲ့ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားကြောင်း လ.ဝ.က ဝန်ကြီး ရုံး Website မှာ သူတို့ နိုင်ကဒ်လေးတွေ တင်ပေးပါလားဗျား
အော်ဖြစ်နိုင်ရင် ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအေဘယ်လ် ရဲ့ ထက်အောက် ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဖိုင်လေးလဲ တင်ပေးပါဗျာ။
၁၉၄၈ ခု မတိုင်ခင် မျိုးဆက် ၂ ဆက် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ သက်သေပြပုံ နမူနာလေးကြည့်၇အောင်ပါ။ သူသားသမိး ၊ မြေးတို့ရဲ့ နိုင်ကဒ် ဓါတ်ပုံလေးတွေရောပေါ့ဗျာ။
လက်ရှိ လွှတ်တော်က တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကော်မတီ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးသိန်းညွန့်တို့ပါတဲ့တဲ့ ကော်မတီ) ကို သူတို့ကြိုက်ရာ မြို့နယ် တစ်ခုကို ရွေးစေပြီး ခင်ဗျား ဌာနက ရုံးတွေကို စစ်ဆေးမှုခံ နိုင်ပါသလား?
ခြကိုက်၊ ပျက်ဆီး၊ ပျောက်ပျက် ဖိုင်တွေရှိနေရင် ခင်ဗျားရယ်။ ဒုဝန်ကြီးရယ်၊ ညွှန်ချူပ်၊ ညွှန်မှုးတွေအလုပ်က ထွက်မယ်လို့ အာမခံရဲလား။
၁၉၉၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကို ညွှန်းတာပါ။ ၁၉၄၈ ခနှစ် မတိုင်ခင် ၁၉၀၀ ခုနှစ်တော့ စိတ်ကူးမယဉ်ပါနဲ့ဗျာ။
အဖိုး၊ အဖွား ၄ ဦး အနက် တစ်ဦးက တိုင်းရင်းဖြစ်ရင်.. နိုင်ငံသားဖြစ်ရင် ဆိုတဲ့ ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက် (နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ကြေငြာချက်) လေးအတိုင်း လုပ်လို့ ရ/ မရ ခင်ဗျား ရုံး အဆင့်ဆင့် ကို မေးပေးပါ။
လူတွေသိအောင် ကြေငြာပေးပါ။ ဒါတောင် ကျူပ်တို့လို အသက် ၆၀ ကျော်တွေထဲက ဒီတိုင်းပြည်ပေါက် မွတ်စလင်မ် အဖိုးအဖွား ၄ ဦး စလုံး ဖြစ်နေမဲ့လူတွေ ကျန်နိုင်သေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကျမ်းကျိန်ပြတာက လွဲလို့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဖြေပေးပါဦး။
မိဘ နိုင်ကဒ်ကိုင်ပြီးရင် သားသမိးတွေ နိုင်ကဒ်လုပ်တဲ့အချိန် လဝက မရစ်အောင်၊ နိုင်ငံသားတွေကို ခင်ဗျား ဘယ်လို ဥပဒေနဲ့ အကာကွယ်ပြဌာန်းပေးနိုင်မလဲ။
Tags: 1982 citizenship law, immigration, Khalid Walid, NRC